Australian တက္ကသိုလ်တွင် စုံတွဲတစ်တွဲရဲ. လိင်ကိစ္စ ပေါ်ထွက်လာ | Buzzy
Australian တက္ကသိုလ်တွင် စုံတွဲတစ်တွဲရဲ. လိင်ကိစ္စ ပေါ်ထွက်လာ
တက္က သိုလ်ထဲတွင် စုံတွဲတစ်တွဲသည် လိင်ကိစ္စ ပျော်မြူးနေချိန် အင်တာနက်သို့ အခြားကျောင်းသားတစ်ဦးမှ ရိုက်ကူးလွှင့်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ NSW university.၏ လူသွားလူလာများသည့် နေရာတွင် စောင်ခြုံ ပြီး လိင် ကိစ္စ အပျော်ကြူးခဲ့သည့် စုံတွဲအား လူမှု ကွန်ယက်ပေါ်တွင် ဝေဖန်မှု များ အပြစ်တင်ရေးသားမှု များ ပြု လုပ်သူများပြားခဲ့သည်။ Australian နိုင်ငံတွင် ယခုကဲ့သို့ သော တက္က သိုလ်ကျောင်းသားများကို မည်ကဲ့သို့ အရေးယူအပြစ်ပေးမည် ဆိုသည်ကို ကျောင်းအာဏာပိုင်များမှထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေ။
တက်က သိုလျထဲတှငျ စုံတှဲတဈတှဲသညျ လိငျကိစ်စ ပြျောမွူးနခြေိနျ အငျတာနကျသို့ အခွားကြောငျးသားတဈဦးမှ ရိုကျကူးလှငျ့တငျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ NSW university.၏ လူသှားလူလာမြားသညျ့ နရောတှငျ စောငျခွုံ ပွီး လိငျ ကိစ်စ အပြျောကွူးခဲ့သညျ့ စုံတှဲအား လူမှု ကှနျယကျပျေါတှငျ ဝဖေနျမှု မြား အပွဈတငျရေးသားမှု မြား ပွု လုပျသူမြားပွားခဲ့သညျ။ Australian နိုငျငံတှငျ ယခုကဲ့သို့ သော တက်က သိုလျကြောငျးသားမြားကို မညျကဲ့သို့ အရေးယူအပွဈပေးမညျ ဆိုသညျကို ကြောငျးအာဏာပိုငျမြားမှထုတျပွနျခွငျးမရှိသေးပေ။